Mar de Frades kutaura kwakanakisa kweAlbariño mazambiringa.
Waini yemichero ine marin reminiscences iyo inotinyengera nekunaka kwayo kutsva
Nguva yekutanga yakatanga nekushisa kwakanyanya kwaikonzera kunonoka mukudonha kweashizha uye mukuora kwemarara, saka nguva yekudyara uye chando chasvika, aine maawa anotonhora mazhinji. Muna Kubvumbi mabukira akaendesa mashizha ekutanga uye yakatanga nguva yekunaya nesimba uye yakawanda kusvika pakupera kwaJune. Iko kuyerera kwakaitika nekushisa kwakanyanya kwekutanga uye kumisikidzwa kwemichero kwakaitika munguva pfupi yezuva, izvo zvakapa mukana kumadiki madiki, mazhinji uye akaomeswa. Iyo veraison yakasvika musi waNyamavhuvhu 10, panguva imwechete nemaawa akasimba ezuva, izvo zvakatungamira mukutenderera kusingazungunuke neye yakadzika yeiyo kunhuhwirira. Musi waSeptember 14th, takatanga goho iro ratinogona kutsanangura serakasiyana uye rakanaka.
Kukohwa kunotanga muminda yedu yemizambiringa, tichicheka chete mabhuru ane hutano ayo anozoendeswa kuchitokisi mumabhokisi madiki. Iyo chete 87% yemazambiringa iwayo akaiswa kumusoro ndokuendeswa kuGanímedes macerators, kwaanogara nematehwe avo aine CO2 kwemaawa makumi mana. Nenzira iyi isu tinowana yakachena uye yakasimba maruva musati, iyo inozovirisa pamwe yavo yeast kuratidza kuti Atlantic uye varietal zvinonhuwira zvewaini. Pashure pacho, iyo mvura yacho icharamba iripo kwemwedzi mishanu ichikwegura pamakumbo ayo.
Iwaini ino inopa chekristalline chimiro, mandimu ruvara uye kuratidzira kwegirini apuro peel. Iyo inopenya chimiro inokoshesa kuonga mavara emaruva pamhino, jasmine uye violets iyo yakanyudzwa pamwe nefennel, mango uye apricot, uye inofambidzana nehukuru hwehuwandu hwe saline. Pane palate, inoonekwa iri sublime, yakashinga uye ine simba, kusvika kumagumo akasarudzika uye Atlantic.
Iyo saline uye yemaruva zvinyorwa zvevheniyi ngatizvibatanidze pamwe nezvinonhuwira zvegungwa zvakadai semazai, matura kana girazi tsvina. Zvakare nekuda kwekuputira kwayo uye kusimba pamukanwa iri waini yatinogona kunakirwa ne nyama yenguruve zvinyoro nyoro kana maronda akapora.
Chitaura chine chiratidzo chekupimisa kuitira kuti kana waini ichinge yadzikwa pane chaiyo yekushisa tembiricha, chikepe chidiki chinobuda ndokunyangarika kana kwanyanya kudziya kuti twiwe.